Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Xusuusta Uur-cunayaasha: Kansarka Wasakhaynta Sababa
Odor-cunayaasha, oo ay qaybisay Blistex Corp., ayaa si mutadawacnimo ah dib ugu yeedhaysa waxyaalo badan oo gaar ah oo Odor-cuna ah oo la soo saaray intii u dhaxaysay taarikhda March 1, 2020 iyo Ogosto 22, 2021, ilaa heerka macaamilka. Tijaabada guduhu waxay cadaysay heerar hoose ee wasakhowga benzene ee qaar badan oo gaar ah oo ka mid ah alaabooyinkan hawada hawada lagu shido.
Afar badan oo Odor-Eaters® buufinta budada ah ayaa saameeya dib u yeerintan ikhtiyaariga ah, gaar ahaan:
UPC Sharaxaada Alaabta Luudh Taariikhda uu dhacayo
041388004310 ur-cuniyaal budada buufiyo (113 g) LOTD20C04 EXP 03/2022
041388004310 ur-cuniyaal budada buufiyo (113 g) LOTD20K13 EXP 10/2022
041388004310 ur-cuniyaal budada buufiyo (113 g) LOTD21H03 EXP 08/2023
Benzene waxaa loo kala saaraa sida kansarka bini'aadamka, walaxda keeni karta kansar iyadoo ku xiran heerka iyo heerka uu gaarsiisan yahay. Bini'aadamka adduunka oo dhan waxay maalin walba, si joogto ah ula kulmaan benzene ilo badan, gudaha iyo dibaddaba. Benzene waxay ku baahsan tahay deegaanka. Soo-gaadhista benzene waxay ku iman kartaa neefsashada, afka, iyo maqaarka.
Badeecadaha buufiska ah ee si mutadawacnimada ah loogu yeero Odor-Eaters waxay ku jiraan gasacadaha hawada. Alaabooyinka ayaa si heer qaran ah loogu qaybiyay Kanada iyada oo loo sii marayo dukaamo kala duwan. Macaamiishu waa inay joojiyaan isticmaalka kuwan gaarka ah ee Uur-cuniyaasha buufinta oo si habboon u tuuraan. Fadlan ka eeg sawirka hoose si aad u heshid meesha aad ka heli karto tafaasiisha koodka gasacada.
Laga bilaabo Noofambar 18, 2021 saacada 8 subaxnimo (EST), macaamiishu waxa laga yaabaa inay galaan odoreatersrecall2021.com si ay u codsadaan soo celinta alaabta iyo macluumaad dheeraad ah. Macaamiisha waxay kaloo la xiriiri karaan 1-855-544-4821 wixii su'aalo ah Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 8:00am-5pm (EST). Odor-eaters waxay sidoo kale ogeysiineysaa tafaariiqayaasheeda warqad waxayna diyaarinaysaa soo celinta dhammaan alaabada la buufiyo ee si mutadawacnimada ah loogu yeedhay. Macaamiishu waa inay la xiriiraan takhtarkooda ama bixiyaha xanaanada caafimaadka haddii ay la kulmeen wax dhibaato ah oo laga yaabo inay la xiriirto isticmaalka alaabtan buufinta ah.
Dareen-celinta xun ama dhibaatooyinka tayada leh ee la kulma isticmaalka alaabtan badan ayaa laga yaabaa in lagu wargaliyo barnaamijka Ka-warbixinta Dareen-celinta Xun ee MedEffect ee Kanada mid online ah, boostada caadiga ah ama fakiska.